'हिट र फ्लप हातमा हुन्न'- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
अर्पण थापाले जति फिल्म खेले/बनाए, सोही अनुपातमा सफलता पाएका छैनन् । तैपनि फिल्म खेल्ने, लेख्ने, बनाउने र हेर्नेबाहेक अरू केही गर्दैनन् ।
असार १३, २०७६ गोकर्ण गौतम
फिल्म एक्टिङ र डिरेक्सन पढे । फर्किएपछि प्रस्ताव आयो, सिक सिटीबाट । मुर्रे केर निर्देशित यस फिल्मको बजेट थियो, जम्माजम्मी अढाई लाख । त्यो पनि सर्ट होइन, फिचर फिल्म नै । अर्पणलाई आफ्नो क्षमता पस्कनु थियो, त्यसैले बजेट र ब्यानर हेरेनन् । सानो लगानीको सिक सिटीले उनको करिअरमा ठूलो भूमिका खेल्यो । कम्तीमा फिल्मको अभाव भएन । आफ्नै मर्जीले नखेल्नु त अलग कुरा ।
अभिनेताका रूपमा उनलाई नेपाली फिल्मले स्विकारिसकेको छ । त्यसो त अर्पणको परिचय अभिनेतामा मात्र सीमित छैन । लेखन र निर्देशनमा पनि सक्रिय छन् । उनी निर्देशित चौथो फिल्म घर साउन ३ गते प्रदर्शन हुँदै छ । उनी नेपाली फिल्मका लागि ‘आउटसाइडर’ हुन् । यहाँ चिनजानको कोही थिएनन् । जति पहिचान बनाए, आफ्नै बलबुतामा । यसबीच अनेक आरोह–अवरोह झेल्नुपर्‍यो । तर यात्रा रोकिएन । घरको पोस्ट प्रोडक्सनमा व्यस्त अर्पणले बडो आत्मविश्वासका साथ सुनाए, ‘र, कहिल्यै रोकिने पनि छैन ।’ भनिन्छ नि, आत्मविश्वास नै आधा जित हो । बाँकी समय र संघर्ष ।
संयोग कस्तो भने, असाध्यै कम बजेटको फिल्मबाट डेब्यु गरेका अर्पणले दोस्रो फिल्मचाहिँ ठूलो बजेटको पाए, ब्याच नम्बर १६ । आठ वर्ष अगाडि प्रदर्शित यस फिल्ममा करिब डेढ करोड लगानी भएको थियो । प्रचार उस्तै धमकेदार । केन्द्रमा अर्पण नै थिए तर बक्सअफिसमा चिप्लियो । यसको अपजसको भार स्वाभाविक रूपमा अर्पणको थाप्लोमा पनि पर्ने भइहाल्यो । यही कारण हुनुपर्छ, त्यसपछि अठार महिना फिल्मी गतिविधिबाट टाढिए । के उनलाई डिप्रेसन भएको थियो ? अर्पण झट्ट भनिहाल्छन्, ‘होइन तर किन–किन फिल्म खेल्न मन लागिहालेन । बरु विदेश जाउँ–जाउँ जस्तो भएको थियो ।’ धन्न ! विदेश गएनन् । बरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभनमा हुने ठगीमाथि फिल्म लेखे । नाम थियो, धन्दा ।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, अर्पण कवि पनि हुन् । हिरो बन्नु अगावै उनका कविता राष्ट्रिय अखबारहरूमा छापिएका थिए । कवि हजुरबुबा विनोद अश्रुमालीको प्रभाव थियो । साहित्यिक चेत र लेखनप्रतिको लगावले अर्पणलाई स्क्रिप्ट लेख्न खास समस्या भएन । धन्दा निर्देशन गरे, सुदर्शन थापाले । मुख्य भूमिकामा चाहिँ अर्पण नै । अनुहारभरि दागैदाग र स्टिच गरिएको अर्पणको लुक्सले त्यतिबेला खुब चर्चा पाएको थियो । आफू आम अभिनेताभन्दा अलग भएको छनक दिए । भयो पनि त्यस्तै, त्यसपछिका प्रायः फिल्ममा अर्पणले केही नयाँ गर्ने प्रयास गरे । छड्केमा ज्यादै हिंस्रक गुन्डा बने, बधशालामा सेनाको मेजर । आफैंले लेखेको मौनमा बोल्न नसक्ने पात्रका रूपमा देखापरे । अर्पण भन्छन्, ‘मलाई सोकल्ड हिरोभन्दा ‘डार्क’ क्यारेक्टर नै मन पर्छ ।’ उनलाई मनपर्ने अभिनेता नै द डार्क नाइटका हेथ लेजर हुन् ।
लेखन र अभिनय मात्रले अर्पणको भोक मेटिएको थिएन । निर्देशन जो गर्नु थियो । सर्ट फिल्म द डिजाइनरले विदेशी फेस्टिभलमा उत्साहजनक उपस्थिति जनाएपछि थप हौसिएका थिए । त्यसकै परिणाम थियो, मुखौटा । यस फिल्ममा को थिएनन् ? राजेश हमालदेखि सुनील थापा, रवीन तामाङ, प्रशान्त ताम्राकार, सौगात मल्ल हुँदै दयाहाङ राईसम्म । अर्पण आफैं पनि खेले । ग्याङस्टारको कथा थियो । हाइप पाउने भइहाल्यो । निर्देशनमा अर्पणको डेब्यु दमदार हुने अपेक्षा थियो । तर मुखौटा फ्लप भयो । अर्को ठक्कर ! भन्छन्, ‘पोस्टको काम नसकिएर तोकिएको भन्दा दुई सातापछि रिलिज भयो । त्यहीबेला विश्वकप फुटबल सुरु भयो । नन–लिनियर कथावाचन पनि दर्शकले रुचाएनन् ।’
अर्पण निर्देशित दोस्रो फिल्म आधा लभ पनि व्यावसायिक रूपमा असफल ठहरियो । न सुनकेशरीले नै लगानी उठायो । तर आफ्नो कर्मबाट कहिल्यै हच्किएका छैनन् । अन्यथा, घरसम्म कसरी आइपुग्थे ? अर्पणकै शब्दमा, ‘रिजेक्सन’ ले ऊर्जा दिन्छ, डिप्रेसन होइन । यसको प्रमाण हो, तीन फिल्मको स्क्रिप्ट लगभग तयार हुनु, गाउँखाने कथा, बैंकक नाइट्स र मुखौटा २ । यी फिल्म क्रमैसँग बनाउने योजना बनाएका छन् । उनी अभिनीत पछिल्लो फिल्म ए मेरो हजुर ३ हिट भयो । वीरविक्रममा पनि उनलाई मन पराइयो । लप्पन छप्पन २ को सुटिङ बाँकी छ । जति आफूमा अभिनय क्षमता छ, त्यति पस्कने मेलोमेसो नमिलेको दुःखेसो छ उनको । भन्छन्, ‘चुनौतीपूर्ण रोल गर्न मन छ । तर के गर्नु, न पर्याप्त समय दिन्छन्, न पैसा र सुरक्षा । आफूले चाहेर मात्र नहुँदोरहेछ ।’
अर्पणमाथि एउटा आरोप छ, उनको अभिनय ‘लाउड’ हुन्छ । यसलाई ठाडै नकार्दैनन् । तर्क गर्छन्, ‘लाउड अभिनय गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । बजारले त्यही रुचाउँछ । लाउड नगरी अभिनेता स्थापित हुन सक्दैन ।’ वीरविक्रम र ए मेरो हजुर ३ मा उनैलाई आफ्नो अभिनय ‘लाउड’ लाग्छ । अगाडि थप्छन्, ‘तर के गर्नु, यिनै फिल्म हिट भए, मेरो चरित्र पनि रुचाइयो ।’ त्यसो त ‘लाउड’ को एकोहोरो आरोप लगाउनेलाई उनी आफू अभिनीत मौन र डाइङ क्यान्डलजस्ता फिल्म हेर्न सुझाउँछन् । कुरोको चुरो उही, यथार्थ अभिनय गर्न नचाहेको वा नसकेको होइन तर ‘लाउड’ गर्नुपर्ने अघोषित बाध्यता छ ।
निर्देशन होस् या अभिनय, अर्पणले जति काम गरे, सोही अनुपातमा सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । तीतो–सत्य हो यो । उनी आफैंलाई आफ्नो क्रेज थाहा छैन, बाटोमा हिँड्दा कसैले चिन्यो भने अचम्म लाग्छ रे । तर फिल्म खेल्ने, लेख्ने, बनाउने र हेर्नेबाहेक अरू केही काम गर्दैनन् । यसैबाट जीवन चलेको छ । विदेश जाने सोच हराएको छ । ‘हिट र फ्लप त मेरो हातमा हुन्न,’ अर्पणको अठोट छ, ‘सर्जकका रूपमा स्तरीय फिल्म बनाउन प्रयास मात्र गर्न सक्छु । रेड क्यामेरा नपाएको दिन डीएसएलआरले खिच्छु । डीएसएलआर पनि पाइनँ भने क्यामेराले खिच्छु । तर फिल्म बनाउन कहिल्यै छोड्दिनँ ।’
अर्पणका प्रिय ५